नेपालगन्ज फोटो फेस्टिवल जेठ २५ र २६ मा – Sadarline
बाँके आयुर्वेदद्वारा सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीलाई निशुल्क औषधि बितरण
छठको आज दोस्रो दिन निर्जल उपवास गरिँदै
रिलिफ फण्डमा जोडिने मनकारीहरु ४० पुगे
भेरीको परीक्षणमा चालिस जनामा कोरोना पुष्टि
बैङकका कर्मचारी आन्दोलित
१४ बैशाख, नेपालगन्ज : दोस्रो नेपालगन्ज फोटो फेस्टिवल आगामी जेठ २५ र २६ गते नेपालगंज मा हुने भएको छ । फेस्टिवलको अवसरमा आयोजना हुने फोटो प्रतिस्पर्धाकालागि विहिवार देखि फोटो आह्वान गरिएको छ । वैशाख मसान्त भित्र फोटो पठाई सक्नुपर्ने छ ।
नेपालगंज फोटो फेस्टिवलाका परिकल्पनाकार अन्तरालका प्रमुख कार्यकारी जयनारायण शाहले प्रतिस्पर्धावाट सर्वोत्कृष्ट फोटोले ‘ वर्ष फोटो ’ उपाधि पाउने बताए । ६ वटा विधामा उत्कृष्टले पुरस्कार पाउँछन् ।
प्रतिस्पर्धामा ५ वटा विधाहरु दैनिक जनजीवन र समाचार, खेलकुद, पर्यटन र संस्कृति, वन्यजन्ु र प्रकृति, नेपाल स्माइल( खुशी र उमंग) रहेका छन् । यस वाहेक यस वर्षदेखि नेपालगंज फोटो फेस्टिवलको व्यानरमा ‘सेल्फी’ खिचेर फेस्टिवलको पेजमा पोष्ट गर्ने मध्ये सर्वौत्कृष्ट लाई पनि नगद पुरस्कार सहित पुरस्कृत गरिनेछ ।
फेस्टिवलले यस वर्ष देखि पश्चिम नेपाल समेट्ने गरि आकार लिदैछ । प्रदेश न.५ , ६ र ७ मा पहिलो नेपालगंज फोटो फेस्टिवल (२०७३ अषाढ १९ र २०) यता खिचिएका तस्वीर प्रतिस्पर्धामा पठाउन मिल्नेछ । आगामी वर्ष देखि १ वर्ष अवधिको फोटो मात्र प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिनेछ ।
उत्कृष्ट १ सय ५ वटा तस्वीरहरु प्रदर्शनीमा राखीनेछ । नेपालगंजमा हुने प्रदर्शनी २ दिन सम्म संचालन हुनेछ । यस वर्षदेखि प्रदेश न. ६ र ७ को १–१ स्थानमा र ५ को पनि अन्य १ स्थानमा प्रदर्शनी यात्रा गर्ने तयारी गरिने छ ।
फेस्टिवलमा फोटो प्रतिस्पर्धा र प्रदर्शनी बाहेक फोटोग्राफी तालीम , फोटोग्राफी अन्तरक्रिया, फोटोग्राफी टुर , स्ट्रीट फोटो डिस्प्ले, पुरस्कार वितरण र विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम पनि गरिनेछ ।
डुडुवामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरु
सदरलाइनडटकम १४ बैशाख, नेपालगन्ज : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वार्ड नं. ६ हिरिमिनियाबाट भत्ता वितरण शुरु भएको हो । नया आर्थिक वर्षको मसिंरदेखि फागुन महिना गरि ४ महिनाको भत्ता वितरण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा नं. ६ का १ सय […]
४ मंसिर २०७५, मंगलवार ११:३२
नशालु पदार्थ खुवाई कुँवर नानपारामा लुटिए
२० आश्विन २०७५, शनिबार १५:२९
बाँकेको सडक दुर्घटनामा मृतक सबै छ जनाको सनाखत
१ भाद्र २०७३, बुधबार १४:४८
बास- ब्राईटल्याण्ड युवा पुरस्कार -२०१६, परविनको हातमा